HEVITRA 3 MIARAKA AMIN'NY VAROTRA MANARAKA NA CRAYOLAS | Asa tanana
Irene Gil | | asa-tanana, Asa-tanana misy loko, Asa-tanana ho an'ny ankizy
Ao amin'io tutorial entiko ianao Hevitra 3 atao amin'ny pensilihazo na fantatra koa amin'ny hoe pensilihazo. Lavorary izy ireo raha ny ankizy, indrindra ny hevitra voalohany sy faharoa. Amin'ny fahatelo dia mampiasa ny vy izahay, fa amin'ny fanaraha-mason'ny olon-dehibe iray dia tsy hisy olana. Noho izany, fantaro hatrany izay rehetra azonao noforonina tamin'ity fitaovana mahazatra amin'ny asa-tanana ity.
2.1 Hevitra 1: savoka miendrika endrika
2.2 Hevitra 2: sary hosodoko voninkazo voaravaka
2.3 Hevitra 3: Kitapo lamba voaravaka
Mba hanaovana ireo Crafts hampiasainay ho toy ny fitaovana mahazatra ny pensilihazo o pensilihazo. Ho fanampin'ireny dia mila manaraka ireto koa ianao fitaovana:
Bobongolo vita amin'ny silipo
Fanamainana volo na basy hafanana
Amin'ny manaraka Video-tutorial afaka mahita ilay dingana ny tsirairay amin'ireo Hevitra 3 misy savoka miloko. Tena mora izy ireo ary afaka jerena amin'ny antsipiriany ny fizotrany.
Andao hizaha ny dingana hanaraka avy amin'ny tsirairay amin'ireo Crafts ka tsy manadino na inona na inona ianao ary afaka manao ny tenanao ao an-trano.
Hevitra 1: savoka miendrika endrika
Amin'ity hevitra voalohany ity dia hanova ny endrika mankany amin'ny savoka. Hevitra tsara ny omena fotsiny na ho fanamboarana ny ireo savoka izay tsy tadiavin'ny ankizy intsony satria efa be mpampiasa. Tapaho fotsiny ny savoka sombiny kely ary apetraho ao anaty bobongolo vita amin'ny silika izay tianao. Tsy maintsy manendasa azy ireo ianao amin'ny 200ºc mandra-pahatongan'ny savoka tain. Rehefa mitranga izany dia esory ny lasitra amin'ny lafaoro ary avelao ho maina izy. Rehefa maina dia azonao atao ny mamaha ny savoka, izay hanana ny endrik'ilay lasitra nampiasanao.
Mahafinaritra satria efa fantatsika fa maniry zava-baovao foana ny ankizy, fa leo ny fitaovana izy ireo na mila zavatra tiana kokoa. Amin'ity hevitra ity dia tsy hanana izany olana izany intsony ianao. Raha efa reraky ny savony taloha izy ireo dia avadiho ho lasa endrika vaovao amin'ny endrika mahafinaritra fa tsy mividy vaovao.
Hevitra 2: sary hosodoko voninkazo voaravaka
Ho an'ity hevitra faharoa ity dia hoforoninay sary tany am-boalohany satria hiditra izy ireo anaro. Tamin'ity indray mitoraka ity dia vitako Flores, fa manana fahafaha-manao an'arivony maro ianao. Ataovy sary fotsiny ilay ampahany tianao ho fisaka, ary ho an'ireo faritra izay tadiavinao amin'ny fanamaivanana dia atsonika ny savoka ary avelao hianjera amin'ny taratasy izy io. Mampiasa ny basy hafanana mandrendrika azy ireo satria mahomby dia haingana izy io, fa raha tsy manana kosa ianao dia afaka mampiasa a fanamainana volo mahazatra.
Mametraha a Marco tsara tarehy na mahasarika maso, mifanohitra amin'ny sary hosodoko ataonao. Azonao atao koa ny manao sarin'olona manao akanjo ary vita amin'ny savoka miempo no anaovana azy. Na koa ny toerana mahafinaritra izay misy faritra sasantsasany manampy trotraka. Miankina amin'ny eritreritrao izany rehetra izany.
Hevitra 3: Kitapo lamba voaravaka
Ny hevitra farany tiako indrindra, satria afaka mahazo famaranana lehibe ianao amin'ny lafiny rehetra fitafiana o bag. Safidio ny lamba tianao haingo ary a môdely izay tianao. Arotsaho eo amin'ny stencil ny fisorohana savoka ary aolahy. Aza adino ny mametraka ny taratasy fanendasana o taratasy legioma eo afovoany ka tsy miraikitra amin'ny vy ny savoka.
Ny zavatra tsara momba an'io dia ny manasa azy amin'ny milina fanasana lamba satria tsy manjavona izy io, noho izany dia afaka mamorona kitapo sy akanjo maro be ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » HEVITRA 3 MIARAKA AMIN'NY VAROTRA NA VAROTRA
DIY Tsoratadidy telo ho an'ny andron'ny mpifankatia